IGoogle Stadia: iyini, iyini intengo yayo kanye nekhathalogi yemidlalo | Izindaba zamagajethi
IGoogle Stadia: iyini, iyini intengo yayo kanye nekhathalogi yemidlalo
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, uGoogle wethule ukubheja kwakhe emhlabeni wemidlalo yevidiyo ngeStadia, ipulatifomu yegeyimu yokusakaza evumela ukuthi siyithokozele ngaphandle kokuyifaka ngaphambili kwikhompyutha yethu noma ngabe iyini, ngoba isebenza kunoma iyiphi idivayisi , ngokungakhathaleli i-hardware yakho.
Kusukela yamenyezelwa, inkampani ibimemezela izindaba ezahlukahlukene noma iguqula ezinye zalezo ebesivele zimemezele, ngakho-ke namuhla kunzima impela ukwazi ukuthi sizotholani ngempela ngeStadia ngoNovemba 19, usuku olusemthethweni lokwethulwa kwayo amazwe athile. Lapha sichaza yini yiGoogle Stadia, ibiza malini, isinikeza ini nokuthi ikhathalogi yayo ikuphi.
1 Yini iGoogle Stadia
2 Yini engiyidingayo ukujabulela iGoogle Stadia
3 Ngingayidlala kuphi iGoogle Stadia kusuka
4 I-Google Stadia itholakala kumaphi amazwe
5 Ibiza malini iGoogle Stadia
6 Imidlalo iyatholakala kuGoogle Stadia
Yini iGoogle Stadia
I-Stadia yakwaGoogle isinikeza indlela entsha yokujabulela imidlalo yethu esiyithandayo ngaphandle kokubheka noma kunini uma siyenza kusuka kukhompyutha noma kukhonsoli, kusukela imidlalo isebenza ngqo kumaseva weGoogle, nathi sithumele kudivayisi yethu ngendlela yokusakaza ividiyo ngezenzo esizenzayo ngaso sonke isikhathi.
Okuwukuphela kwento edingekayo ukuze sikwazi ukufinyelela futhi sijabulele iGoogle Stadia yisilawuli kude, irimothi exhuma kwinethiwekhi ye-Wi-Fi yekhaya lethu futhi yona exhuma kumaseva aqhuba umdlalo ngokuthumela isignali epulatifomu esisebenzisayo, noma ngabe i-smartphone, isiphequluli noma ithelevishini yethu nge-Chromecast Ultra.
Ngamanye amazwi: IGoogle Stadia iyinsizakalo esivumela ukuthi sidlale ukude noma ngabe sikuphi. UStadia wazalelwa ukuvumela wonke umuntu ukuthi ajabulele noma yimuphi umdlalo ngaphandle kwesidingo sokuvuselela ikhonsoli noma i-PC yethu njalo ukuze akwazi ukuyijabulela ngokugcwele ngaphandle kwemikhawulo ejwayelekile yehadiwe ephelelwe yisikhathi.
Amandla okucubungula weGoogle Stadia Iphakeme kunaleyo enikezwa yi-Xbox One X ne-PlayStation 4 Pro, enenani eliphelele lama-teraflops ayi-10,7. Amandla wokucubungula avumela ipulatifomu yegeyimu yevidiyo yokusakaza ye-Google ukuthi inikele ekuqaleni ngesinqumo esiphezulu se-4k kuma-fps angama-60, ekugcineni ifinyelele ezinqumweni eziyi-8k kuma-fps ayi-120.
Yini engiyidingayo ukujabulela iGoogle Stadia
Njenganoma iyiphi insizakalo yokusakaza ividiyo enikeza okuqukethwe okungu-4k, isivinini sokuxhuma naso kuyinto okufanele icatshangwe kuGoogle Stadia, ngoba kuya ngalokhu sizokwazi ukujabulela ikhwalithi yevidiyo ehlukile.
Ukuze uthokozele konke okuqukethwe ngekhwalithi ye-4k kuma-fps we-6, i-HDR no-5.1 umsindo ozungezile, isivinini esiphansi sokuxhuma kwethu kufanele sibe Ama-35 Mbps.
Ukudlala i-1080 kuma-fps angama-60, i-HDR ne-5.1 umsindo ozungezile, sidinga okungenani Ama-20 Mbps.
Izidingo ezisezingeni eliphansi zokukwazi ukujabulela iGoogle Stadia ku-720p naku-60 fps ngomsindo wesitiriyo, sidinga okungenani Ama-10 Mbps.
Ngingayidlala kuphi iGoogle Stadia kusuka
IGoogle Stadia isebenza kuwo womabili amadivayisi weselula we-Android namakhompyutha ngesiphequluli. Yize uhlelo lokusebenza lweGoogle Stadia lwe-iOS lutholakala, ayisivumeli ukuba sijabulele imidlalo endaweni yesikhulumi, kusivumela kuphela ukumisa nokuphatha ipulatifomu kuwo wonke amadivayisi ahambisanayo.
Okwamanje Amaphikseli weGoogle kuphela ahambelana neGoogle Stadia, umkhawulo ngesimo sodwa esizonyamalala ezinyangeni ezizayo, inqobo nje uma iGoogle ingafuni ukubona ukuthi ukuzibophezela kwayo emhlabeni wemidlalo yevidiyo akuphumeleli. Uma sikhuluma ngamathebulethi, okwamanje kunezinhlobo ezintathu kuphela eziqinisekiswe ngokusemthethweni: I-Google Pixel Slate, i-Acer Chromebook Tab 10 ne-HP Chromebook X2.
Uma sifuna ukujabulela kuthelevishini, sidinga i-knob yokulawula ne-Chromecast Ultra, okungukuthi, leyo efakiwe kuphakethe lokuqalisa kanye nerimothi, ngoba iza nesibuyekezo se-firmware iyahambisana neGoogle Stadia. Le mfuneko ngeke idingeke emavikini azayo njengoba i-Google ikhipha isibuyekezo sale divayisi.
Uma une-TV ephethwe yi-Android, ngeke kuze kube maphakathi no-2020, lapho izosebenzisana ngqo nensizakalo futhi ngeke kudingeke ukusebenzisa i-Chromecast Ultra ukuze ukwazi ukujabulela le sevisi kuthelevishini.
I-Google Stadia itholakala kumaphi amazwe
Ngesikhathi sethulwa, iGoogle Stadia izotholakala kuphela emazweni we-14:
Ibiza malini iGoogle Stadia
Ngesikhathi sethulwa, iGoogle Stadia izotholakala kuphela ngenkokhelo yanyanga zonke yama-akhawunti weStadia Pro, i-akhawunti enentengo yama-euro angu-9,99. Futhi ngisho lokhu, ngoba kusuka ngo-2020, iGoogle izokuvumela futhi ukuthi uthokozele iStadia Base, i-akhawunti yamahhala ezosivumela ukuthi sijabulele inani elincane lemidlalo elinokulungiswa okuphezulu okungu-1080 ngaphandle komsindo ongu-5.1 Surround, kuphela kusitiriyo.
Intengo yanyanga zonke Mahhala I-9.99 euro
Ukulungiswa okukhulu 1080p 4k kuma-fps angama-60
Imidlalo Inombolo elinganiselwe Yonke imidlalo endaweni yesikhulumi
Ngaphezu kokusivumela ukuba sijabulele imidlalo yethu esiyithandayo, sizophinde sibe nethuba lokuthenga imidlalo yakamuva esanda kufika emakethe ukuze sikwazi ukuyithokozela. uma zingatholakali kungxenyekazi yeGoogle.
Uhlobo IStadia Base, yakhelwe njengengxenyekazi yokuthengisa imidlalo yevidiyo, Njengoba manje singakwenza ngeSteam, Epic Store noma ezitolo zemidlalo yamavidiyo kuzo zombili i-Xbox ne-PlayStation, ngoba akudingeki sikhokhe imali yenyanga noma ngasiphi isikhathi.
Imidlalo iyatholakala kuGoogle Stadia
Kusukela ngoNovemba 19, usuku iGoogle Stadia eqala ngalo ukusebenza, sizoba nalo kuphela ikhathalogi encishiswe kahle kwezihloko, izihloko esizichaza ngezansi:
I-Assassin's Creed Odyssey
I-Destiny 2: Iqoqo
Vele udansa i-2020
I-Kortal Kombat 11
I-Red Dead Redemption 2
I-Tomb Raider: Edition Okuchazayo
Ukuvuka koMgibeli WeThuna
Umthunzi weTomb Rider: I-Definitive Edition
Kuzo zonke lezi zihloko, okuye kwaba semakethe isikhathi esincane kakhulu yiRed Dead Redemption, isihloko esithi hit consoles ngoFebhuwari kepha ayizange ifike ku-PC kuze kube amasonto ambalwa edlule. Kuyo yonke inyanga kaDisemba, iGoogle iqinisekise ukuthi izokwengeza izihloko ezilandelayo:
Ukuhlaselwa kweTitan 2: Impi yokugcina
Umphathi webhola 2020
I-Ghost Recon Breakpoint
Esinye sezihloko ezithandwa kakhulu i-hype kukhuphukile emhlabeni wemidlalo yevidiyo ezinyangeni ezedlule I-Cyberpunk 2077, umdlalo ozofika maphakathi no-2020 futhi ozotholakala kuGoogle Stadia.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Amakhonsoli » IGoogle Stadia: iyini, iyini intengo yayo kanye nekhathalogi yemidlalo
Izandiso ezihamba phambili ze-Chrome
Ingabe unayo i-malware ye-InfoSearch ku-Mac yakho? Ngakho-ke ngikwazile ukukuqeda